Beerlula - Codka Ubax
Marka horeba in aan seexdo ayaan rabay. Aroorta shaqo ayaa i sugaysa. Dhinaca ayaan dhulka dhigay. Balse hal mar – markii u dambeysay – waa in aan sii eego Facebook-ga. Dhanka bidix ayaan u jiifaa, ishaasina barkinta ayay ku aasan tahay. Bustaha ayaa luqunta ka noqda. Gacanta midig ayaa kor u haysa telefoonka. Waan furay, waa farriin. Aqoon hore isu ma aannu lahayn, waan se arki jirey muuqaalkeeda. “Ma fiican thy.” Intaas ayaa meesha dhex taalla. Intii ay jawaabtaydu sii socotay, waxa ka hor timid farriin kale. “Walaal iga raalli ahow, qof kale ayaan u waday.” Oo miyaan yeelayaa. Waan ka diiday. Diidmo bilow u ahayd oggolaansho ka xeel dheer. Kaftan ayaannu isku karbaashnay. Farahaygu mar keli ah ayay nasanayeen, marka ay kuweedu shaqaynayaan. Wakhtigii hurdada aan u jiifsaday, waxa laga joogaa laba saacadood. Waan fasaxay, kolley se gam’i maayo dhowr kale.
Miyaannu is waayeynaa! Waan doontay. Way i sugaysay. Xidhiidh waxa ugu wanaagsan, ka ay dadkiisu isku mawjad saaran yihiin. Tallaabada ayaannu hal meel, isku mar, wada dhigaynay. Kaftankii xalay aannu ka cabnay ayaannu ka durduurannay. Wakhti ku habboon markii ay gaadhay, waannu is wacnay. Isku magaalo ayaannu noqonnay. Laba bilood ayaannu maalintii dhowr jeer kala dab qaadan jirnay. Marka aan la hadlayo waan iska qoslayaa, naxdin yarina way igu jirtaa. Dareen ciyaalnimo ayaa i gelaya, adduunka farxad ii ma dhinna. Marka ay khadka ka maqan tahay ayay iigu daran tahay. Wixii werwer dunida korkeeda saarnaa ayaa la ii xambaarinayaa. Caqligu ma sheegayo in ay suuqa u bixi karto, in ay hawl kale ku maqnaan karto. Caqligu beryahan wax badan ma sheego. Shaqadiisii wadnaha ayaa haya. Isaguna kolba dhan ayuu ii eryaa. Marka aan helo ayuu i dejiyaa. Marka aan la hadlo ayaan wixiiba illoobaa. Maskaxda oo i la yaabbanayd ayaa hoos ii tidhaa “maxaan ku lahaa?”
Masha Allah, carruur qurux badan ayaad dhashay.
Waan gariiray markii aan intaa akhriyey. Maanta ayay jimce ahayd. Salaadda ayaan carruurtayda u sii kexeeyey. Baabuur ayay wadatay. Way i aragtay, u ma aan jeedin. Maalmahanba in aan u sheego ayaan rabay. In ay aragtay aniga oo aan u sheegin, aad ayaan uga naxay. Nasiibwanaag ka ma ay xumaan. Qof intaa ka wanaagsan weeyaan. Dhinacna waan ka farxay, waayo waran igu taagnaa ayay iga goysay. Taasi way isku kaaya soo dhoweysay. Dhowaansho keenay in aannu kulan qabanqaabinno. Goor fiid ah ayaannu ballannay. Kulankuna in aanu soddon daqiiqo ka badan ayaannu is la garannay. Way ku qanacday, waan ku farxay.
Boqoraddii noloshayda ayaan la kulmayaa. Ballantu 7-da fiidnimo ayay tahay, 5-tiiba diyaar baan ahay. Dhankeeda ayaan u jihaystay. Goobtii ayaan joogsaday 6:50. Way i soo wacday, waan u sheegay in aan joogo. Daqiiqado ka dib ayay soo baxday. Dukaanta ay ku jirtay ayay hal tallaabo bannaanka uga soo saartay markii ay ishaydu qabatay. Wadnaha ayaa afka i yimid. Way soo tallaabsatay, waan gariiray. Qurux la nooc ah, wallee in aanan hore u arkin. Way soo dhowaatay. Qoyaanka laabta iyo dhabarka ordaya ayaa maryaha igu dhejiyey. Daaqadda ayaan soo tiigsaday, waan ka furay, way soo gashay. Mawjad cadar, cod iyo dareen ku midoobeen ayaa dhabanka bidix igaga soo horreysay. Cunaha ayaa la ii is taagay. Dhankayga ayay soo eegaysaa, waanay dhoollacaddaynaysaa. Wax aan idhi ma xasuusto. Iyada ayaa se wax i tidhi.
Wan galaalan in laguu qalo ayaad caawa istaahishaa, laakiin xerada adhi ku ma ogi.
Indhaheeda ayaa soo celinaya nuurka shaashadda gudaha ee baabuurka ka imanaya. Shookaanta ayaan ku dhegganahay, sidii oo uu baabuurku iga baxsanayo. Way i la hadlaysaa, jawaabta ayaan ku marganayaa. Isha ayay igu xadaysaa, markayga ayaan sugayaa. Ballantu soddon daqiiqo ayay ahayd, afar saacadood ayay maraysaa. Baabuurku halkii ayuu weli taagan yahay. Annagu se waannu is la dawaafnay. Waa habeenka aan ogaaday in aanu hadalku dhammaan, dhadhankuna aanu ka tegin, marka aad qofkaaga la joogto.
Sannad ayaannu sidaas uun ahayn. Sannad noloshayda ka suntan, weligeyna aanay xusuustiisu i daynayn. Waraaqihii dhoofka ee u xaraysnaa ayaa ficil u baahday. Way ii sheegtay, waa in ay Jabuuti u tagto waraysi. Saddex cisho ka hor bixitaankeeda ayaan meelo badan u qaaday. Tigidhka ayaan galabtaa la doonay. Xinne ayay soo saaratay, bannaanka ayaan ku sugay. In aan ka ag dhowahay ayaa micne weyn ii samaynaysa. Fiid ayaan gurigii geeyey, u sheegay in aan diyaaradda saari doono. Way iga yeeshay. Subixii bixitaankeeda, salaaddii subax markii aan tukaday guriga ku maan noqon. Suuqa ayaan wax ka sii cunay, daaqaddii gurigooda ayaan baabuurka ag joojiyey. Guuxa ayay dareentay. Way ii soo baxday. Waannu isku faraxnay. Garbasaar ayay si debecsan u huwanayd. In aan soo quraacday ayay i weydiisay. Naxariista way u dhalatay. Intii ay isa soo diyaarinaysay ayaan baabuurka dhex fadhiyey. Muddo ka dibna iyada oo quruxdeedii wax ku darsatay ayay soo baxday. Shandad ay jiidaysay ayaan la booday, in yar ka dibna waannu dhaqaaqnay. Waa subax ayaamaha kale iiga duwan. Waa subax aan qayb iga mid ah iska dheerayn doono. Qof iga tegi doona ayaan u sahlayey bixitaankiisa.
Waxa aannu hore isu la meel dhignay in aannu is guursanno. Subaxan saaka ah se, baabuurka ayaannu ka dhex ooyeynaa. Ballan ayaannu kala qaadnay. In aanu jacaylkaasi dhib mudan oo aanu daranyoonin. Laabta oo i culus ayaan diyaaradda saaray. Halkaa marka aan joogo, waxa iigu darnayd in aan magaaladii dib ugu soo noqdo. In ay wax iga yaalleen ayaan illoobay, naftu way ka qalootay. Qof ay meeli ololayso ayaan ahay, duhurkiiba in ay farriini ii taallo ayaan eegay. Waan ku hungoobay. Sidiisii ayuu wadnuhu ii sheekeeyey. Hurdo waan ledi waayey. Toban darandoorri ah ayaan u diray. Laba cisho ayay hawada ka maqnayd. In aanay kaadh haysan ayay ii sheegtay. Dhib ma leh, mar haddii aan helay. Suuqa ayay markaas ka timid, baskii guriga geynayey ayay saaran tahay. Way sugi kari weyday inta ay aqalka gaadhayso. Kaadhkii ayay telefoonka gashatay, waanay i soo wacday. Iyada oo xiiqsan ayay boholyow hayey iiga sheekaysay. Dadka ag fadhiya in aanay danaynayn ayay ii sheegtay. Sidaas ayaannu ahayn laba bilood.
Waxa ay iigu darnayd markii maalin Isniin ah ay i soo wacday. Fiisihii ayay safaaraddu imika soo siisay. Waan la qoslay, si weyn. Waan se naxay, keligey. Dhidid baa i qooyey. Way se iga farxisay. In ay saddex bilood ay magaalada i la joogi doonto ayay ii sheegtay, inta aanay bixin ka hor. Cirka ayaan carrabka la gaadhay. Xaaskayga in aan ka dhigto ayaannu ku heshiinnay marka ay timaaddo magaalada.
Waa maalmihii doorashada Maraykanka. Muddo kooban ayaa ka dhiman codbixintii, kaambaynkuna meel xun ayuu marayaa. Maalmahaas ayuu balaayadii wejiga casayd uu Soomaalida argagixiso ku sheegay. Waxa uu booqday gobolka Minnesota, waxa uu doonana wuu ku hadlay. Maalmo ka dibna waa la doortay. Trump ayaa madaxweyne noqday. Ilmahaa timaha rifani in uu wadnahayga Geeska Afrika ku nool wax yeelayo, waan garanayey. Boqoraddayda walaasheed ayaa werwertay. Way soo wacday. Waxay ku amartay in ay degdeg u tagto Itoobiya, halkaas ay labadoodu ku kulmaan, sidaasna ku dhoofiso, inta aanay xaaladdu ka sii darin. Rejo aan dhisayey ayaa hortayda ku kala daadatay. Ma diidi karo oo waa daw. Ma yeeli karo oo waa nabar. Iyadaoo ilmaynaysa ayay walaasheed ku la kulantay Addis Abeba. Toddobaad ayay hawada ka maqnayd. Way i soo wacday. Waxa ay ii sheegtay in wax walba loo dhammeeyey, diyaaraddana ay ku qoran tahay habeen dambe. Caloosha ayaa i dhaqaaqday. Waan se u duceeyey. Sidaas ayay ku baxday.
Hurdo iyo cunto waannu kala dhaarannay. Midkoodna dhadhan ma leh. Maalintii tobnaad ayuu telefoonku dhawaaqay. Kaadhadhka la iibiyo ayay iga soo wacday. Codkeedii muddada badan i la jaarka ahaa, caawa bado waaweyn ayaa noo dhexeeya. Ma tiigsan karo, ma taaban karo. Toban daqiiqo ayaannu isku oynay, khadkiina wuu go’ay. Dareemmada ayuu xejin waayey, ayaan is idhi. Waan ku celiyey, wuu dhici waayey. Illaa maanta ma hayo boqoraddaydii. Meel ay joogto, meel aan ka helo iyo si aan u helana ma garanayo. Boqol farriimood waan u dhigay boggeedii dhaawaca igu beeray. Waxa aan sugayaa maalinta ay arkayso, haddiiba ay aragto.
Duco Iyo Habaar
Waa sheeko murug leh oo beri baa sidaasi i qabsatay oo gabar aan dunida ugu jeclaa oo aan 3 sano xiriir lahayn ayaa turky waxbarasho u tagtay. Aabaheed oo ayaamahaa stanbul la deganaa iyada ayaa ku amray in ay wax talephone ah joojiso ilaa luuqadda waddanka oo 6 biloof lagu barto ay barato.
Dhowr bil ayaan waayay xogteeda aan baan u murugooday. Ilaa ay si dhuumaleysi ah ay gabar saaxiibteed ah whatsapp-keeda igala soo hadasho.
Yarkaa arrintu haysato ha iska dulqaato rejadana kheyr ha naawilo.